Ingxoxo noDkt King Costa weGlobal Center for Academic Research - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda on I-9th Ngo-Ephreli 2020 I-9th Ngo-Ephreli 2020
UDkt King Costa, uMqondisi ophethe kanye noMbhalisi e-Global Center Yezemfundo noCwaningo Olumanyanisa Umphathi e-AMADI University College eSwaziland.
Amaphrofayli aku-inthanethi: I-ORCID iD // I-Linkedin // ResearchGate // -Google Scholar // I-Academia.edu // Izincwadi
Iyiphi indima yososayensi bezenhlalo nabaphathi ekuphenduleni ezinkingeni zomphakathi, i-COVID-19 kuleli cala? Kungani ukuthuthukisa amandla okucwaninga ezikhungweni zase-Afrika kubalulekile? Izikhungo zezwekazi zase-Afrika zingaqhakambisa kanjani ukukhiqizwa kolwazi futhi zifinyelele ezingeni elingaphezu kwesifundo? Kungani ukuxhumana ocwaningweni kuncike ebuholini bocwaningo? Funda ngezimpendulo ezinokuqonda zikaDkt.
UDkt King Costa usosayensi wokuphatha, iLungu eliHlangene leNhlangano Yezimboni Zezimboni kanye Nenhlangano Yezengqondo YaseNingizimu Afrika (SIOPSAkanye nelungu leSouthern African Research & Innovation Management Association (ISARIMA). Njengamanje uyi-Postgraduate Research (MBA) Supervisor ku- EMANCOSA (The Management College of Southern Africa). Ubuye futhi abe yilungu leKomidi Lesayensi Kwengqungquthela Yokufundisa ka-2020 (techling2020.web.ua.pt/) ezobanjelwa e-University of Aveiro ePortugal kanye nengqungquthela yesi-5 Yomhlaba kwi-Qualitative Research (https://wcqr.info/world-conference-on-qualitative-research/).
Okuningi kwe-bio yami kuyatholakala at https://drkingcosta.academia.edu/
Ngokucinga ngohlaka oluvulekile lweSayensi (I-OSF).
Yebo ngihlanganyele okulungiselela nge-Preprints.org nohlaka oluvulekile lweSayensi:
Ukubuyekezwa okuhlelekile kwezinselelo ekuqondisweni kocwaningo emaNyuvesi aseNingizimu Afrika - https://www.preprints.org/manuscript/201812.0305/v1
Ukukhulisa ukusebenza kwenhlangano kanye nokufeza izinhloso ngemfundo esekwe ngekhono - https://www.preprints.org/manuscript/201903.0162/v1
Kwethulwa i-CO, STA Postgraduate Research Model - Indlela Ehambisanayo Yokuqondisa - https://www.preprints.org/manuscript/201904.0073/v1
Umhlahlandlela Ohlelekile Wokuhlaziywa Kwemininingwane Efanelekile ngaphakathi kwe-COSTA Postgraduate Research Model - https://osf.io/sq2dh/
Kwethulwa i-CO, STA Postgraduate Research Model - Indlela Ehambisanayo Yokuqondisa - https://proceedings.wcqr.info/index.php/wcqr2019/article/view/200
Ucwaningo lwami lufanelekile kumongo wase-Afrika ngoba lufuna ukunikeza izisombululo kubacwaningi base-Afrika abathola iziqu ekuqondeni imiqondo yocwaningo olubucayi ukuze babasize baqede izifundo zabo emanyuvesi, kuyilapho ngasikhathi sinye bezama ukusiza abasebenza ngolwazi ukuthi basebenzise ukucabanga okuhle nokucwaningwe. izixazululo zokuxazulula izinkinga. Imodeli ye-COSTA ngokwayo, njengoba u-andragogy efuna ukuhlinzeka indlela yokuxazulula izinkinga.
Umongo womsebenzi wethu eGlobal Center for Academic Research ukusiza i-Afrika ekukhiqizeni ulwazi. Sikholwa ukuthi iqhaza lamanyuvesi ukuba abaholi ekuthuthukiseni ulwazi bese kuthi okwesibili bakhiqize ulwazi abangaqhubeka nokwenza lokho ngaphezu kwemisebenzi yabo yokufunda. ENingizimu Afrika, uHlelo Lokuthuthukiswa Kwezwe likwenzile lokhu kugcizelela ukuthi amanyuvesi kumele agxile kule ndawo yokuthuthukiswa kolwazi - ukuze sibe yisizwe esishintshayo sisuselwa kwizinsizakusebenza sibe sisekelwe olwazini. Ngokuphambene nalokho, ukuqhathanisa ukutholwa / ukubhaliswa emayunivesithi nalabo abaqedayo akukwanelisi neze. Ucwaningo lwethu (preprint) luthole ukuthi inkinga enkulu ethinta okokusebenza ngamandla ocwaningo kulawa manyuvesi.
Kubhekiswa kundatshana emayelana ne-COVID-19, sisaqhubeka nale phrojekthi. Njengososayensi bezenhlalo nezokuphatha, sifuna ukuqonda imithelela emphakathini maqondana nezinkinga ezithile, futhi manje inkinga yomhlaba wonke yinto ye-COVID-19. Kwakubalulekile ukuqonda izimbangela zokwethuka lapho sase sizwile kakade ngokuqubuka kweChina ngoDisemba. Ngaphezu kwalokho, bekubalulekile ukuqonda ukuthi ngabe indlela abantu abaziphatha ngayo ezintweni ezithile ingafana. Isimo eNew York naseNingizimu Afrika (yize iNew York iyiDolobha futhi iNingizimu Afrika iyizwe) kubonakala kunokufana okuthakazelisayo. Abantu bebengenaso isiqiniseko sokuthi le COVID-19 iyini nokuthi izoba yini ukuhlala nokubhekana nayo. Njengoba ukwazi ukubona, sisebenzise Ukuhlaziywa Kokuqukethwe ukuhlaziya izinhlelo zokusebenza zemidiya ezahlukahlukene ngendlela abantu abazizwa ngayo. Ukufana kwadonselwa phakathi kwalezi zindawo ezimbili ezehlukene futhi kwacaca - abantu bangabantu nje futhi badinga ulwazi futhi bazi ukuthi kwenzekani. Kusukela lapho, uhulumeni waseNingizimu Afrika ukhombisile ubuholi obubonakalayo kanye nokubonakala - futhi kuyacaca ukuthi kungani uMongameli Ramaphosa aqhubeka nokucela abantu ukuthi bangatatazeli - ngoba wayekwazi okumele kwenziwe futhi wayelokhu ekhombisa lokho, ngokuhlanganyela nabo bonke ongqongqoshe beKhabhinethi futhi ngisho nokuxhaswa ngamaqembu ezepolitiki.
Njengamanje, sisebenza ezindabeni ezihlobene nabasebenzi, amava abo abukhoma abalulekile kithi. Lokhu kuqonda kuzosiza izinhlangano ukuthi zithathe ngokungathi sína izindaba zezempilo nezehlakalo eziyinhlekelele uma sazi umthelela kubasebenzi. Lokhu kuqubuka kudale ukwesaba ngaphezu kovalo - izindawo zokusebenza manje sekuyizindawo ezihlotshaniswa namandla okuthola inkontileka ye-COVID-19. Ngakho-ke indima yethu njengabacwaningi ukuxazulula izinkinga futhi njengamanje inkinga ibhekwa ngendlela yokubuka umphakathi.
Ukuxhumana kocwaningo e-Afrika kudinga ubuholi bezocwaningo obuzokhuthaza ubuchwepheshe obunamandla emisebenzini yocwaningo. Njengamanje sisebenzela ukusungula inhlangano yocwaningo ezoqhubeka nokufuna ukudala ubudlelwano nezinhlangano eziningi zocwaningo ezwenikazi. Amaseva wangaphambi kokuphrinta adinga ukukhuthazwa - uma ibhodi lokuhlela elithembekile selakhiwe ngamanyathelo okuqala futhi ukukhuthala okufanele kunikezwe kokuthunyelwe - kubalulekile ukukhuthaza ukuhanjiswa kwangaphambi kokuphrintwa. Lokho kukhuthaza ukuxhumana kokutholakele okusha ababhali abangadinga ukukuxhumana. Ngakho-ke ukuze lokhu kuxhumana kuthembeke - ibhodi yokuhlela idinga ukuthuthukisa izindlela zayo zokubuyekeza.
UDkt Costa King, MD kanye noMbhalisi kwa-G-CAR
Ngiyabonga ngengxoxo enokuqonda. UDkt King Costa usebenza ukuletha izisombululo kubacwaningi bezokwelapha kanye nabaqeqeshi base-Afrika ocwaningweni. Ucwaningo e-Afrika luxhomeke ebuholini bokucwaninga. Indima yamanyuvesi ukuthi abe ngabaholi ekwakheni ulwazi.
Ingabe unayo imicabango noma imibuzo kaDkt King Costa? Ungabashiya ebhokisini lokuphawula elingezansi.
Tags: I-AfricanResearchUkutholakala kocwaningo lwase-AfrikaEzokuxhumana Kwesayensi